Afgooye:-Wararka naga soo gaaraya Degmada Afgooye ayaa sheegay in jidka loo galay maanta duhurkii masuuliin ka tirsan gobalka Banaadir kuwaas oo ku sii jeeday Degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose waxaana weerarka ku qaaday ciidamo ka tiran ururka Al-Shabaab.
Masuuliyiintan wadada loo galay ayaa waxay mucaawino u wadeen ciidamada DFKM ee kusugan degmada Afgooye waxaana ka mid ahaa ragii sigtay gudoomiye ku xigeenka dhanka amniga ee gobalka Banaadir Warsame Maxamed Jood , Afhayeenka Gobolka Banaadir, Gudoomiyaasha degmooyinka Xamar weyne, Xamar Jajab iyo Degmada Shibis .
Dagaalka ayaa socday mudo waxaana u soo gurmaday masuuliintii wadada loo galay ciiidamo ka tirsan DFKM iyo kuwa ciidanka AMISOM waxaana ay madaafiic is weydaarsadeen cidamada Al-Shabaaab .
Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa u sheegay wariyaha Halgan.net ee magaalada Muqdisho in dagaalka maanta uu ku dhintay mid ka mid ah ilaalada Masuuliinta wadada loo galay waxaana sidoo kale jira dhaawac aan wili la aqoon tiradooda.
Iska horimaadka ayaa waxaa uu ka dhacay Deegaanka u dhexeeya Lafoole iyo Ceelasha halkaas oo noqotay halaq mareen ay dirqi ku maraan saraakiisha iyo masuuliinta DFKM .